Ukunqoba ku-Abubakar kungayisixazululo eBiafra | Bayede News
Home/ Ipolitiki/Ukunqoba ku-Abubakar kungayisixazululo eBiafra
Ukunqoba ku-Abubakar kungayisixazululo eBiafra
NGEZINTATHA zangoLwesithathu I-Independent National Electoral Commission (INEC) imemezele inhlangano kaMuhammadu Buhari i-All Progressives Congress (APC) njengenqobe ukhetho lukazwelonke eNigeria. Ngokwale khomishini le nhlangano inqobe ngama-56% idla iPeople’s Democratic Party (PDP) eholwa ngu-Atiku Abubakar yona ethole amavoti angama-41%. Ngokukasihlalo wale khomishini uMahmood Yakubu i-APC ithole amavoti evile ezigidini ezili-15.2 kanti iPDP ithole amavoti ayizigidi ezili-11.3.
Kusukela ngowe-1967 iNigeria inenkinga yesifundazwe iBiafra efuna ukuhlubuka ibe yizwe elizimele. Kulesi sifundazwe kugcwele isizwe sama-Igbo okusukela ngowe-1966 selokhu kwaketulwa uMengameli uNnamdi Azikiwe asikaze siwathole amandla ombuso. Ama-Igbo ahlangana azama ukuvikela ukubusa kwawo ukuyinto eyaholela empini enkulu kutholene phezulu umbutho wezempi waseBiafra kanye nokaHulumeni owawuholwa nguJenene uMohammed Shuwa ngaphansi kobuholi bukaYakubu Dan-Yumma Gowon. Wakhala ngaphansi umbutho wezempi waseBiafra kulo mzamo wokuhlukana neNigeria, kanti nangowezi-2000 uMengameli uOlusegun Obasanjo owayengomunye woJenene ababelwa nombutho weBiafra waxosha bonke oJenene ababeseka abangama-Igbo abangokudabuka eBiafra okuyinto eyakhombisa kuthi usalibambile igqubu ngale mpi kwazise bangaphezu kwezigidi ezimbili abantu abafa ngenxa yale mpi.
Kusukela kulesi sinqumo sika-Obasanjo kwaqala phansi ukukhala ngokucwaswa nokucindezelwa esizweni sama-Igbo okunamhlanje kunenkinga yokubhebhetheka kwemizamo yokuhlubuka kuNigeria. Kulandela lesi sinqumo uNnandi Kanu wabe esesungula i-Indigenous People of Biafra (IPB) okuyinhlangano egqugquzela ukuhlubuka kweBiafra kuNigeria. NgoMfumfu wezi-2017 imizamo kaKanu yathola ukwesekwa okukhulu njengoba kwaba nemashi ecela isehlukanisa emva kokuphuma kukaKanu owayeboshelwe amacala okuvukela umbuso kusukela ngoMfumfu wezi-2015. Ukuboshwa kwakhe kwabonakala kumsiza lo mholi ukuthi ahlanganise isizwe sama-Igbo ekutheni seseke izwi lakhe lokwehlukanisa neNigeria, okuyinto eyaphoqa uMengameli uBuhari ukuthi abuye e-England la ayelashelwa khona ukuphathwa indlebe ukuze ezobhula lo mlimo.
Ngaphambi kokhetho uKanu wanxenxa sonke isizwe sama-Igbo ukuthi singavoti, kodwa ngenxa yokubakhona kuka-Abubakar kulolu khetho lesi sizwe sahlukana phakathi okwaze kwamphoqa naye uKanu ukuthi aze asihoxise lesi sicelo. U-Abubakar ngokwezimpande zokuzalwa kwakhe ungowaseBiafra nakuba engakhulelanga khona njengoba lesi sifundazwe sasikhungethwe yizimpi. UKanu uzamile ukumchitha lo mholi ethi izimpande zakhe ziyakhombisa ukuthi ungowaseCameroon. Ayibanga impumelelo le mizamo yakhe njengoba amakhosi endawo athi wona amazi eyi- Igbo okungakho azomseka okhethweni ukuze kunqandwe lo mkhuba wokuvalela ngaphandle abesizwe sama-Igbo kuhulumeni kazwelonke.
Okokuqala eminyakeni emihlanu kwabonakala uKanu elahlekelwa amandla okulawula isizwe sama-Igbo njengoba abaholi bendabuko bemchithile. Lokhu kumchitha kwabo kuphinde kwaveza nokuthi abaholi bendabuko abasiboni isidingo sokuhlubuka kuNigeria uma kunqoba u-Abubakar kwazise ungomunye wabo. UKanu uzamile ukuzihlanganisa nombono walaba baholi njengoba zingama-25 kule nyanga ebhale kuTwitter ukuthi i-INEC ihlangene noBuhari ukuqinisekisa ukuthi u-Abubakar akalunqobi lolu khetho. Lezi kwaba ngezinye zezinkomba zokuthi ukunqoba kuka-Abubakar kungayinqanda le nkinga yesehlukaniso esifunwa iBiafra kuNigeria.
Yize bekubonakala le nkinga izoxazululeka kodwa imiphumela yokhetho iveze ukuthi isazoqhubeka le nkinga njengoba ephinde wanqoba uBuhari. Kuzokwazeka ukuthu uBuhari unyamanambana kuma- Igbo njengoba wayengomunye woJenene ababelwa naso lesisizwe ngowezi-1967 bevimba imizamo yaso yokuzama ukwehlukana neNigeria.
Bazimisele ukufa lapho efa khona uMkhwebane
‘Ngilindele ukusocongwa noma yinini’
Isethulo esicijise imikhonto nxazonke
Ubufakazi baleli sonto bumbule izinqe uKoloane